Fanaraha-maso kalitao - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
YONWAYTECH amin'ny maha-mpanara-drafitra fampirantiana matihanina manerantany, manana fanaraha-maso tsara ny kalitaon'ny LED izahay avy amin'ny akora ho an'ny vokatra mandritra ny fandrosoan'ny famokarana.
Mba hahatratrarana ny fampisehoana tsara indrindra ho an'ny efijery LED sy ny rafitra fanaraha-maso fampisehoana LED, ny yonwaytech dia manana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny fampidiran-dresaka LED avy amin'ny fitaovana mankany amin'ny fanaraha-maso kalitao.
Toy ny LED chips, mitondra IC, LED Module ary LED kabinetra amin'ny LED fampisehoana tontonana.
Ny LED ampiasainay ho an'ny fampisehoana LED anatiny na ivelany izay manana fahatokisana sy fifanoherana avo, zoro fijerena malalaka ary tsy miovaova tsara izay mahafeno ny filana ny tahan'ny famelombelomana avo lenta, ny haavon'ny volondavenona avo ary mitazona ny loko voajanahary amin'ny fotoana iray miaraka amin'ny fanamiana loko tsara indrindra.
Wire varahina na tariby volamena namboarina mihitsy aza no nitarika chip mba hahazoana antoka ny fampisehoana LED tsara indrindra.
Famirapiratry ny hazavana namboarina namboarina ho an'ny filanao tetikasa.
Mba hahatratrarana ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny fampisehoana yonwaytech anatiny sy ivelany, dia mampiasa ny IC mitondra fiara tsara indrindra ao amin'ny maodely mitondra antsika izahay, toy ny MBI5124, ICN2038, ICN2153, ICN2053, MBI5153 miaraka amin'ny tahan'ny fanavaozana avo lenta> 1920HZ, volondavenona avo. ambaratonga miaraka amin'ny teknolojia farany.
2.0mm hateviny amin'ny 4 sosona varahina voaendrika ao amin'ny PCB birao mba hahazoana antoka tsara ny hafanana dissipation fototra.
Indoor raikitra p2.5 nitarika Module pcb 4 sosona 2.0mm fametrahana varahina.
Outdoor raikitra p2.5 nitarika Module pcb 4 sosona 2.0mm fametrahana varahina.
Fampisehoana maody malefaka malefaka malefaka 1.56mm, 1.875mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm ... sns.
Serivisy ivelany ivelany nitarika Module 3.91mm, 4.81mm, 5.33mm, 6.67mm, 8mm, 10mm, 16mm (DIP)…sns.
C: Kabinetra LED
Ny toetr'andro rehetra ho an'ny tontolo ivelany, dia afaka miasa tsara amin'ny toetry ny andro rehetra.
Ny fiarovana avo lenta amin'ny IP65 dia miantoka, maharitra, azo itokisana, Anti-ultraviolet ary tsy miovaova.
Outdoor IP65 rano porofo vy vy namboarina kabinetra nitarika.
Ampiasaina amin'ny pixel pitch midadasika 2.5mm, 2.9mm, 3.0mm, 3.3mm, 3.84mm, 3.91mm, 4.0mm, 4.81mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.67mm, 8.0mm, 10.0mm, 16mm, 20mm Sns
Outdoor IP65 rano porofo maty fanariana aluminium magnesium firaka kabinetra ho an'ny ivelany na ivelany fampiasana.
Ampiasaina amin'ny pikantsary midadasika P2.5 ,P2.9,P3.0,P3.3,P3.84,P3.91,P4.0,P4.81,P5.0,P6.0,P6.67 ,P8.0,P10.0,P16,P20…sns.
YONWAYTECH amin'ny maha-azo itokiana anao amin'ny maha-azo itokiana anao, dia manao izay tratry ny herinay foana izahay mba hanomezana vokatra azo itokisana ho anao, nefa koa tafavoaka velona amin'ny serivisy vidiny tsara ho an'ny mpanjifanay izahay.
Boaty baoritra ho an'ny maody LED, famatsiana herinaratra, processeur vidéo, rafitra fanaraha-maso fitarihana na singa hafa amin'ny efijery mitondra miaraka amin'ny kasety tsy misy rano voafono tsara, lanja maivana kokoa mba hahazoana antoka fa mitsitsy ny vidiny amin'ny fotoana fandefasana haingana kokoa amin'ny alàlan'ny Express amin'ny tananao.
Varavaran'ny sidina ho an'ny fampiratiana led fanofana na efijery HD tery pikantsary narrow pitch.
Tranga plywood mahazatra ho an'ny fanaterana an-dranomasina amin'ny fampirantiana lanja mavesatra any ivelany.